Kubanjwe umoya ngoShabba | Isolezwe
Kubanjwe umoya ngoShabba
Ezemidlalo / 17 July 2017, 08:57am / Mthokozisi Mncuseni
ISETHENJWA seKaizer Chiefs uSiphiwe Tshabalala okuvele ukuthi silimele
KUBANJWE umoya ngesilomo seKaizer Chiefs uSiphiwe “Shabba” Tshabalala ukuthi kuqambe kufika umdlalo weCarling Black Label Cup abe eseluleme ngokuphelele kungaphindi okwenzeke ezakhe zidla umhlanganiso kwiBokone Bophirima Maize Cup ebiseJames Motlatsi Stadium, eNorth West, ngoMgqibelo abewubuka nezihlwele.
NgokukaSteve Komphela, opheka Amakhosi, okuyiwona agcine edle umhlanganiso kwiMaize Cup ngokunqoba ngo 1-0 wegoli likaGeorge Lebese ehlula iFree State Stars, uTshabalala unenkinga yokuthinteka ndawana thize kodwa akazange asho ukuthi kuphi. Abezimisele ukukusho ekhuluma nabezindaba uthe unethemba lokuthi uTshabalala uzobe eseluleme ngoJulayi 29. Ngalolu suku iChiefs izobe ibhekene nabakhaya baseSoweto i-Orlando Pirates eFNB Stadium kwiCarling Cup.
UTshabalala ngomunye wabadlali abaqavile kwiChiefs ebibhedelwa wuhlelo ngesizini edlule futhi nguyena obevelele kule sizini efile, ngakho akungatshazwa ukuthi umince kanjani uKomphela ngoba ukuwina kwiCarling Cup kungakhuphula ukuzethemba kuyena, abadlali nabalandeli ngaphambi kokuqala kwesizini ka-2017/2018. UKomphela uzobe engena onyakeni wesithathu wenkontikela anayo neChiefs engakanqobi lutho nayo.
Amakhosi adlulele kowamanqamu kwiMaize Cup, abenqobe ngo 2-0 kwiTownship Rollers yaseBotswana ku-semi final yesibili. Eyokuqala inqotshwe yiFree State ngo 1-0 kuPlatinum Stars.
“Ngabe ngikhuluma iphutha uma ngingaphikisa ubumqoka bukaTshabalala kwiChiefs. Okuhle nje ubekhona enkundleni futhi ehleli nabalandeli beChiefs okuyinto engazi kahle ukuthi yena (uShabba) uyijabulele nabalandeli. Sizama ngakho konke ukuqinisekisa ukuthi kushaye usuku lweCarling Cup eseluleme kodwa-ke nathi asazi. Kwesinye isikhathi uke uzitshele ukuthi yinto encane kanti konakele kakhulu. Nginethemba kodwa ukuthi uzobe eseluleme ekupheleni kwenyanga uma sesiya kuloya mdlalo omqoka naleliya qembu elimqoka,” kusho uKomphela kwabezindaba ngemuva komdlalo wamanqamu.
Akazange aliyeke leli thuba uKomphela waqinisekisa ukuthi basazoqhubeka nokuthungatha abadlali kodwa manje sebehlakaniphile. Bathole nethuba lokuziveza abadlali abathathu okuseyibona kuphela abasasayiniswe Amakhosi njengoba kuvuleke iwindi lokushintshana ngabadlali. Laba uTeenage Hadebe waseZimbabwe, Philani Zulu (Maritzburg United) noBhongolwethu Jayiya obekuCape Town City.
“Sisazoqhubeka nokuthenga kodwa sesihlakaniphile manje. Kuningi esiqale sikuhlole manje ngaphambi kokuthi sifake imali. Siphelile manje isikhathi sokuthi sivele siphonse imali singacubungulisisanga. Iqiniso nje ukuthi sibheke kakhulu umgadli ozokwazi ukusiza oGustavo (Paez) noBernard (Parker). Sihlalele ethembeni lokuthi sizomthola umgadli ofanele. Esingeke sikwenze wukumosha imali okuzolandelwa wukumosheka kwazo zonke izinhlelo esinazo njengeChiefs,” kusho uKomphela.